Kungani kubalulekile ukuba nomshuwalense wezimoto? | Izindaba Zokuhamba
Kungani kubalulekile ukuba nomshuwalense wezimoto?
UNacho Cuesta | | Amathiphu
Ihlobo selivele linikeza amagalelo alo okugcina. Kodwa-ke, isimo sezulu esihle sibukeka sesifikile ukuhlala futhi baningi abasebenzisa ngokunenzuzo amakhefu emizuzu yokugcina ukuvala ihlobo ngesitayela kuze kube unyaka ozayo. Yiziphi izinhlelo ezinhle kakhulu zokuqedela ihlobo?
Olunye lwezinhlelo ezinhle kakhulu izindlu zezimoto. Bayanda abantu abakhuthazwayo ukuthi bathathe uhambo ngemoto yalolu hlobo. Futhi akuyona into engaphansi ngoba izinzuzo ezikunikezayo ziningi:
Ithuba lokuhambela izindawo eziningi ngesikhathi esincane
Ukuvumelana nezimo kokungadingi ukuboshelwa esikhathini sokungena noma sokuphuma
Ungesabi nesimo sezulu, ngoba noma ngabe yenzani kangcono noma kubi, lezi zimoto zinohlelo lokushisa ngaphakathi. Manje nge-COVID sebenemfashini kakhulu, kepha yebo, lapho uhamba naye kuphoqelekile ukuba ne- umshwalense wemoto.
1 Izizathu zokuba nomshuwalense wezimoto
2 Imuphi umshuwalense ovame ukuba nawo umshuwalense wezimoto?
Izizathu zokuba nomshuwalense wezimoto
Ukukhempa maphakathi nendalo kunokwayo, kepha futhi kungaba nochungechunge lwezimo ezethu nezinye ukuthi, uma kwenzeka zenzeka futhi sinomshuwalense wendlu yethu yezimoto, singayeka ukukhathazeka ngokweqile.
Unqoba ngokuthula Uma une-crane yokukusiza uma kwenzeka okuthile kwenzeka, ngokwakho noma ngemiphumela yemvelo uqobo njengemililo, izivunguvungu zezimpawu ezinhle noma amagatsha awayo, phakathi kwabanye
Uyakugwema ukukhokha imali eshisiwe uma kwenzeka ukubhidlika, ukweba, ukushaywa kwezinye izimoto noma izikhungo ngisho nokushaywa ngabantu besithathu
Imuphi umshuwalense ovame ukuba nawo umshuwalense wezimoto?
Ngokuvamile, imishwalense eminingi yezimoto ngokuvamile inikela ngokulandelayo ukumbozwa okuyisisekelo:
Funa imali yomonakalo
Abantu abadala bangakwazi faka ezinye izinhlobo zokumbozwa kokuvikelwa okukhulu njengokuntshontsha, amawindi aphukile noma ama-solar panel, phakathi kokunye.
Enye yamamodeli athandwa kakhulu ama-camper vans, okuthi ngosayizi abalingani abashadile abavame ukuhamba nabo izinsuku ezimbalwa kahle. Ezimweni ezinjengalezi, kungcono ukuthola i- umshwalense wokuqasha imotorhome izinsuku. Kepha, kuyonga yini ukuthatha umshwalense walolu hlobo?
Ngalokhu, kuhlolisisiwe ukuthi intengo iyahluka kangakanani lapho kuqashwa umshuwalense wezimoto kubo bobabili abantu besithathu nazo zonke izingozi zezinsuku eziyi-7, 15 nezingama-30.
Uhlobo lomshwalense Izinsuku ze-7 Izinsuku ze-15 Izinsuku ze-30
Amaqembu amathathu 35 - 54 € 60 - 130 € 126 - 195 €
Yonke ingozi 84 - 95 € 179 - 198 € 292 - 332 €
Umthombo: olungiselelwe yiRoams ngokusebenzisa iTerránea.
Ngaphakathi komshuwalense ovela eceleni, intengo ibiza kakhulu noma ishibhile kuye ngokuthi ifaka phakathi usizo lwemoto noma cha, ngokulandelana. Endabeni yomshuwalense ophelele, inani libuye liguqulwe ngokuya ngokweqile komshwalense. Ngakho-ke, uma kuwumshwalense ophelele onama- € 200 amaningi, izindleko zomshuwalense ziphakeme kunalezo zomshuwalense onemali engaphezu kuka- € 300.
Ekugcineni, kuyabonakala ukuthi akukho mehluko omkhulu phakathi komshwalense wezinsuku eziyi-7 noma eziyi-15. Njengomthetho ojwayelekile, ukuqasha i- umshwalense wezimoto njalo ngenyanga uzobiza kancane kwezomnotho ekuhlanganisweni kwezindleko ngosuku Kuthiwani uma ukukwenza isonto noma amasonto amabili. Ngakho-ke, kuzoba kushibhile ngezinsuku eziningi oziqashile.
Futhi ngaphezu kwakho konke, unethuba lokuthi ifayela le- umshwalense uzohlanganisa amalungiselelo mahhala uma kwenzeka kwenzeka okuthile kuwe nakubangane bakho kanye nasendaweni yemoto ohamba ngayo. Ngakho-ke, ukuphulukiswa kwezempilo kuyindlela engcono kakhulu yokuhle kubo bonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amathiphu » Kungani kubalulekile ukuba nomshuwalense wezimoto?